🥇 ▷ Google Pay wuxuu ku darayaa qaab mugdi ah si loo badbaadiyo batteriga mobiilkaaga ✅
Google Pay wuxuu ku darayaa qaab mugdi ah si loo badbaadiyo batteriga mobiilkaaga
Hababka madow waxay noqdeen qayb aasaas ka ah nidaamyada hawlgalka cusub iyo barnaamijyada la socda. Soo-saareyaashu waxay ugu dambeyntii ogaadeen in xaalad mugdi ah ay faa’iido u leedahay jihooyin badan, xitaa xitaa wixii ka dambeeya batteriga. Hada Nidaamka mugdiga ah ee Google Pay midka la ogaa.
Tartiib tartiib Google wuxuu ku sii darayaa habka mugdiga dhammaan barnaamijyadiisa, midkii ugu dambeeyay wuxuu ka mid noqday kuwa loogu adeegsiga badan, sidoo kale waa kan Sawirrada Google, oo horeba ugu riyaaqay habkan la filayo.
Nidaamka mugdiga ah ee Google Pay
Waxaan ognahay sawirradii ugu horreeyay ee na tusaya qaabka mugdiga ah ee Google Pay. Barnaamijkan ma ahan mid aan la joogno dhowr saacadood maalintii, laakiin waxay caan ku tahay taleefannadeena. Maaddaama inta badan aan ku bixinno ku dhowaad dhammaan lacagaha lagu bixiyo aasaaska. Sida aan hadda ognahay, app-ka midabeeysa palette midabbada midabbo dhan iskudarkooda, kaas oo hadda kuu oggolaanaya inaad ku raaxeysato shaashadda shaashadda yar markaynu isticmaaleyno barnaamijka.
Sidaad u arki karto, isugeynta fudud ee Google Pay, oo ah Waxay si sax ah u tahay midda ugu cad, habkan waa gabi ahaanba mugdi. Qaabka cusub si tartiib tartiib ah ayey u gaadhayaan dhamaan isticmaaleyaasha iyada oo loo sii marayo nooca 2.96 ee dalabka, haa, wali may helin qaar badan oo inaga mid ah. Xaqiiqdii waxaan xitaa ka heli karnaa gudaha APK Mirror, sidaas darteed waxay umuuqataa inaan dhowr maalmood sugno si aan ugu raaxeysano taleefannadeena. Habkani inta badan waa ku jihaysan si loo badbaadiyo tamarta Arrinta ah in aannu haysanno moobiil leh shaashad OLED ah, sida tanna ah Google Pixels.
Adoo ka dhigaaya pixels kayar midab madow, waxaa jira badbaadin tamar badan. Xaqiiqdii, noocaan cusub ee Google Pay kaliya Si otomaatig ah ayuu u shaqeeyaa habka mugdiga ah marka aan u wareegno habka keydka tamarta nidaamka hawlgalka. Waxay sidoo kale leedahay badhan si ay gacantaada u hawlgaliso ama u baabi’iso qaabka mugdiga ah. Markaa uma laha dejin ay si toos ah u shaqeyso marka nal hooseeyo ama waqti cayiman. Iyo sidoo kale in si madax-bannaan loo tirtiro. Si kasta ha noqotee, waa nooc hore oo la hubo inuu mustaqbalka helayo cusbooneysiin cusub isagoo ku daray xulashooyinka noocan ah.